Qingdao Huaxin Group Co., Ltd dia miorina amin'ny tanàna andrefana orinasa zaridaina, Jiaonan, Qingdao tanàna, manakaiky ny telo-làlan lalambe amin'ny 100 metatra miala, Jiaoji lalamby, seranam-piaramanidina iraisam-pirenena liuting, baka helo-drano teo aloha, tany sy ny ranomasina ary ny rivotra fitaterana rohy , toerana tena mety.
Ny orinasa naorina tamin'ny 1998, dia ny miaraka planina sy ny famokarana, orinasa mpamokatra entana, fametrahana, ny varotra sy ny fanompoana fahavalo orinasa miara-miasa akaiky. Casting dia nanomboka hanangana an-trano ho an'ny milina famokarana fitaovana fototra. Company indrindra indrindra ara-teknika mpiasa, ny mpitantana sy ny mpiasa atrikasa manana mihoatra ny folo taona ny famokarana zavatra niainany tao amin'ny fanariana orinasa teknolojia.
(A) QXY andian-dahatsoratra vy lovia, piraofilina an'ny nitifitra fipoahana madio-up milina, Q32 fanarahan'ny voatifitra fipoahana madio-up milina, Q37 andian-dahatsoratra hook karazana airless voatifitra fipoahana manadio milina, Q38, Q48 andian-dahatsoratra rojo mihantona nitifitra fipoahana madio-up milina, Q69 andian-dahatsoratra rail vy lovia, rafitra voatifitra fipoahana milina fanadiovana. Q35 turnable karazana, Q76 andian-dahatsoratra nitifitra fipoahana madio-up milina, QGW andian-dahatsoratra vy sodina rindrina ivelany madio-up milina, Q31 karazana amponga-madio-up milina, S11series Mixer fasika.
(B) koronosy milina: Z143 andian-dahatsoratra, Z145 andian-dahatsoratra, Z146 andian-dahatsoratra, Z148 andian-dahatsoratra
Core fitifirana milina: Z86series, ZHTO600 / 700, ZH87series, Z94 andian-dahatsoratra
Shell fototra milina: Z95 andian-dahatsoratra
(C) Ny fahafahana famokarana isan-taona ny 3000 ny 10000 taonina maromaro resin-nampikambana fasika, tanimanga fasika pamokarana.
(D) teny fikasana ny mila fanampiana manokana ny mpampiasa isan-karazany ny madio-up ny fasika fikirakirana milina sy ny milina isan-karazany ny famolavolana, ny famokarana.
Ny orinasa dia manana hery matanjaka ara-teknika, famokarana nandroso ny teknolojia, dia midika hoe tonga lafatra tratra, Siantifika rafitra fitantanana sy ny kalitao fanomezan-toky rafitra henjana araka ny fepetra iraisam-pirenena ho mihazakazaka.
Ny orinasa manaraka ny "fitokisana + toetra + fanavaozana + service" hevitra barotra, famokarana nandroso ny teknolojia, kalitao fepetra henjana, feno ny fanaraha-maso isan-karazany sy ny fitantanana. Market -oriented laza, tso-po fanompoana ho toy ny fepetra.
Ny orinasa mpiasa rehetra handray ny olona avy amin'ny manerana izao tontolo izao handray anjara, handray vao na ny ela ho avy mpanjifa sy hitari-dalana ny asa.